I-terminal block, ii-Insulin zokuBhoboza ukugqobhoza-Haiyan
Iziqhobosho zokuhlaziya i-Insulin
Ukuthintelwa kokudibanisa ukugqobhoza umlilo
Ibloko lesiphelo sendlu
Ibloko yesiphelo sobhedu
DIN-uloliwe uhlobo lonxibelelwano
Ukulinganisa amandla kwi-terminal block
Ibloko yangoku yesiphelo
Iibhloko ezininzi ze-terminal block
Isiphelo sendawo soxhumano oluziphakamisayo
Ibloko lesiphelo sebhokisi yemitha
Isiphelo sendlela yokutshintsha
Umda wokugqibela webhloko
Ibhokisi yokudibana yobungqina bamanzi
Ukungcwatywa kwamanzi ibhokisi yoku jonga amanzi
Itekhnoloji yebhloko yesiphelo
China. I-Haiyan Isiphelo sendawo iibhlokhe Co, Ltd njengeshishini lesiphelo lebhulokishini yokwenza imveliso e-China, iza ngokusebenzisa indawo yemveliso eyinkimbinkimbi. Ngumenzi oqeqeshiweyo ohlanganisa uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa iibhloko ezinkulu zangoku zesiphelo, ezasekwa ngonyaka ka-1991. I-Hainal terminal block brand yaziwa ekhaya nakumazwe aphesheya.
Yintoni Esibonelela ngayo
Ikhethekileyo kwimveliso yeebhloko ezahlukeneyo zesiphelo
Ibloko yesiphelo sendlela ephezulu
Cofa iisampulu zasimahla
Umboneleli wesisombululo kwikhonkco lonikelo lwetsimbi yehlabathi
Indawo yokusebenzela kunye noomatshini
Umgangatho olungileyo, ixabiso lefektri, ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
Yonke uyilo ngokweemfuno zecandelo lokufundisa lemigangatho kazwelonke, inkqubo yemveliso ngokuhambelana nomgangatho wamazwe, yatyala imali eninzi ukuthenga oomatshini bokuvelisa ezichanekileyo kunye nezixhobo zokuvavanya, ukunciphisa impazamo yomqhubi;
Ulawulo lwenkonzo yabathengi ejikeleze yonke indawo, ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokunxibelelana nomthengi, ngokweemfuno zabathengi ukuze abathengi bakhethe iimveliso ezifanelekileyo kunye nezisombululo, iingcali ukusombulula iingxaki zobugcisa.
Ukuchazwa kwemveliso yenkampani kugcwele, kukho ngaphezulu kwama-200 uthotho, kubandakanya iintlobo ezili-1800 zeemveliso ezahlukeneyo, ukuveliswa kwesikali, kuqinisekisa indleko ephantsi, ukuze kuveliswe imveliso ekumgangatho ophezulu. Phambi kokuba siye kwimveliso, siqhuba ngemveliso yolingo kwaye siyayenza uthotho lweemvavanyo ezonakalisayo elebhu.
Inkonzo yeeyure ezingama-24 kwi-intanethi
I-Wechat / iWhatsapp / iselfowuni:
0086-13968745082 (Mnu Eric, UMlawuli oLawulayo)
Abaxhasi bethu abaXabisekileyo
Ipaki yemizi-mveliso yaseWengyang Town, kwisiXeko saseYueqing, kwiPhondo le-Zhejiang
NgoMvulo-uMgqibelo	Ngo-09: 00-18: 00
Sizabalazela ukubonelela abathengi ngemveliso esemgangathweni. Cela ulwazi, isampulu kunye neQhawulo, Qhakamshelana nathi!
Enye imephu yoLwimi
© Copyright - 2010-2019: Onke amalungelo agciniwe. Inkxaso yezobugcisa: globalso